မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: July 2010
History isahistory: violence or non-violence.
His resistance was his history of his struggle against oppression: violence or non-violence. He will always be remembered in history for his courageous resistance.
Those who deny and condemn that history are deceiving themselves; they are not true to themselves; they are guilty of deception. Those guilty of deception are also guilty of untruth. Those guilty of untruth can not embraceaprinciple of nonviolence, because that principle of nonviolence is alsoaprinciple of truth. Truth and deception can not walk the same path.
Freedom is never given; it has to be fought and won. Freedom is notadestiny; it isapath; it lives in the fights to walk that path. To resist is to fight because resistance is freedom. His resistance was his freedom.
Resistance to oppression is the law of truth.
For wherever there is oppression there will always bearesistance because oppression of any kinds can never be legitimate. For as long as there is oppression there can be no truth because oppression and truth can not coexist. So to resist oppression is to follow the law of truth.
History in the waiting
Burma is still writing its history –ahistory of struggle of the oppressed people against the oppressive military dictatorship. It isahistory that we have been writing for the last 48 years. Still we are no where near finishing writing it.
Burma is still in the waiting to writeanew history –ahistory of civilisation. Until we finish writingahistory of struggle against oppression, we can not yet start writingahistory of civilisation.
My attributes to Ko Kyaw Oo (Kyaw Ni) are aboutacause, not personal.
Zaw Naing Wynn (Nyi Nyi Khant)
Posted by Mr Htay Tint at 12:35 PM0comments
နေပြည်တော်ရှိ လွတ်တော်နှင့် ဘုရင်နန်းစံသည့် အိမ်နေရာနှင့်
မနီးမဝေး တွင်နေရာ အိမ်ယာများ ထားလေ့ရှိခဲ့ပါသည် ။
တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များတွင် သစ္စာခံများ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ကွဲပြားစွာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
သီပေါမင်းပါတော်မူ ပြီးသည့်နောက်တွင်ကား နယ်ချဲ့ စစ်အရာရှိများက ပုံစံပြောင်းခဲ့ပါသည် ။
မြန်မာပြည်တခုလုံးကို နိူင်နင်းစွာ အုပ်ချုပ်စေရန်
တော်လှန်ပုန်ကန်မှုများကို လွယ်ကူစွာ တိုက်ခိုက်နိူင်ရန် ဖြန့် ကျက်ကာ တပ်စွဲလိုက်ပါတယ် ။
နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကာလ အတွင်းမှာ ယာယီတပ်စခန်းများသည်
ခိုင်ခန့် သော တပ်စခန်းများအဖြစ်၎င်း ရဲဌါနများအဖြစ်၎င်း
စစ်ရေးအရ ဗျူဟာကျသော နေရာများတွင် တည်ဆောက်လာ ကြပါသည် ။
စစ်မှုထမ်းများ၏ အိမ်ယာကို လေ့လာကြည့်ပါက ပုံစံ ၅ မျိုးကို တွေ့ မြင်နိုင်ပါသည် ။
လူပျိုများရိပ်သာ ( အခန်းရှည်ကြီးထဲမှာ ကုတင်များ တန်းစီချထားပြီး သေတ္တာများကို ခြေရင်း မှာ ထားခဲ့ကြပါတယ် ။
အိမ်ထောင်သည်ရဲဘော်လိုင်း ( အိပ်ခန်း ၁ ခန်း ဧည့်ခန်းမီးဖိုချောင်တွဲရက် ၁ ခန်း စုစုပေါင်း ပေ ၂၀ ၄၀ ) အကြပ်စစ်သည်များလိုင်း ( အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ဧည့်ခန်း ၁ခန်း မီးဖိုချောင် ၁ ခန်း စုစုပေါင်း ပေ ၂၀ ၆၀ ) အရာရှိငယ်များလိုင်း (အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ဧည့်ခန်းကြီး ၁ခန်း မီးဖိုချောင် ၁ ခန်း စုစုပေါင်း ပေ ၂၀ ၆၀) အရာရှိကြီးများလိုင်း (အိပ်ခန်း ၄ ခန်း ဧည့်ခန်းကြီး ၁ခန်း မီးဖိုချောင် ၁ ခန်း စုစုပေါင်း ပေ ၄၀ ၆၀ )
နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်စစ်မှုထမ်းများ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များ ဆောက်ခဲ့သော အိမ်များဖြစ်ပါတယ် ။
လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ ကာလတွေမှာ ကျေးရွာ ဇနပုဒ်အိမ်များကို အခြေခံနေထိုင်ကြသော်လည်း
လွတ်လပ်ရေး ရပြီးသောအခါ အထက်ပါ အင်္ဂလိပ်ဆောက်ထားခဲ့သော တပ်စခန်းများမှာ နေရာဝင်ယူကြပါတယ် ။
ကျွန်အုပ်ချုပ်ရေး အမှုထမ်းများ၏ အိမ်သေးသေးလေးတွေမှာ နေထိုင်ပြီး
တိုင်းပြည်ကို ကျွန်ဇတ်သွင်း အုပ်ချုပ်ပြီး အချင်းချင်း စစ်တိုက်နေခဲ့ပါတယ် ။
၁၉၄၈ မှ ၁၉၆၂ ဒီမိုကရေစီခေတ် ။
၁၉၆၂ မှ ၁၉၇၄ တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ် ။
၁၉၇၄မှ ၁၉၈၈ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်ခေတ် ။
၁၉၈၈ မှ ၂၀၀၇အထိ စစ်အစိုးရခေတ် အထိ
သေးငယ်သော စစ်တန်းလျှားတွေမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ဦးသန်းရွှေ ဦးဆောင်သော ဗိုလ်ချုပ် ၅ ယောက်လောက်က
နေပြည်တော်ကြီး တည်ဆောက်ကာ အရေးကြီးသော ဌါန သစ္စာခံများ အားလုံးကို ပြောင်းလိုက်ပါသည် ။
အိမ်အကြီးကြီးတွေမှာ နေထိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါသည် ။
http://willthedutch.blogspot.com/2007/06/inside-naypyidaw.html ကိုနှိပ်ပြီးဖတ်ပါ ။ နေပြည်တော် အတွင်းမှ ဓါတ်ပုံများစွာရှိပါတယ် ။
ရုံးသစ်သွားလာရေးတွေပြောင်း နေ့ စဉ်ဈေးဝယ်ပုံစံပြောင်းနဲ့ 
တော်တော် အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
၂၀၁၀ ကရောက်မှာတော့ အားလုံးအထိုင်ကြကုန်ပါပြီ ။
အတိုက်အခံတွေလဲ တုတ်တုတ်မှ မလှုပ်နိုင်တော့ပါဘူး
တိုင်ပြည်စီးပွားရေးကိုလည်း နေပြည်တော်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ချုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ် ။
ဒီလို စည်းစိမ်တွေခံနိူင်ဖို့စစ်တပ်ထဲက အိမ်သေးသေးလေးတွေမှာ
နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျွန်ခံ အထက်ဖါးပြီးနေရာ ကြတာပါ ။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးရင် သားစဉ်မြေဆက် စည်းစီမ်ခံဘို့ ရန်သာရှိပါတော့တယ် ။
တကမ္ဘာ လုံးက ထင်နေတာလေ ။
ဇရာဆိုတဲ့ အသက်အရွယ် ကျန်းမာရေးက
နေပြည်တော်အိမ်မှာ နေထိုင်သူတွေကို စပြီးဒုက္ခပေးပါတော့တယ် ။
( အသိဥဏ်နည်းသော မြန်မာမျိုးမြွေကြီးသည် ရေဘုရင်မိကျောင်းကို နိူင်ပြီဟုထင်ကာ
အားပါးတရ စားသောက်ပြီးသော်လည် လွတ်လပ်လိုသော ရေဘုရင်၏ ဝိဥာဏ်က သေဆုံးသော်လည်း
သူရဲကောင်းပီသစွာ ဖေါက်ထွက်လိုက်သည့် ပုံဖြစ်ပါသည် ။
အဟိတ် တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေကာမူ လွတ်လပ်မှုအတွက် တိုက်ပွဲသည် လူသားများအတွက် နမူနာဖြစ်သည် ။
ဒူးနာခြင်း ရောဂါ ။
တသက်လုံးက အိမ်သေးသေးလေးမှာ နေလာတာ အသားကြနေတော့
နေပြည်တော်လည်း ရောက်ရော အိမ်ကြီးတွေက အကြီးကြီးတွေလေ ။
ရောက်ချစက ပျော်သလောက် အခုတနေ့ တခြားစိတ်ညစ်ကြကုန်ပြီ ။
အစည်းအဝေးတွေက ခဏ ခဏ ခေါ်လေလေ ပြင်ဆင်ဖို့ အိမ်ကြီးပေါ်မှာ ပြေးလေလေပေါ့ 
အိမ်ထောင်ရှင်မတွေ စိတ်ညစ်ကုန်ပြီ ။
ယောကျားင်္ရာထူးမပြုတ်ဖို့အမျိုးသမီးအသင်းဝင်ထားရသေးတယ် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မကောင်းဘူးဆိုတာ အလွတ်ကျက်ထားရသေးတယ် ။
အခုတော့ နေပြည်တော်က ဒူးနာရာက အစပြုလို့ 
စစ်ဗိုလ်ကတော် ငြီးသံတွေ နယ်စပ်ကတဆင့် နိူင်ငံတကာပြန့် ကုန်ပြီ ။
သေပြီးရင် ဦးနေဝင်းလို မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ။
မိဘတွေကတော့ နေပြည်တော်မှာ အသေခံပေမဲ့သားသမီးတွေကို
အေးဓမြတိုက်ပြီး ရထား တဲ့ ရွှေထုတ်တွေနဲ့ နိူင်ငံခြားပို့ ကြတဲ့ ။
အခုနောက်ဆုံးကြားရတာ နအဖ အဆွေအမျိုးတွေကို ဗီဇာပိတ်တယ်တဲ့
နေထိုင် လုပ်ကိုင်စားသောက်ခွင့် မရှိဘူးတဲ့စစ်ဗိုလ်မိသားစုတွေ ကိုယ်ကျိုးနည်းကုန်ပြီ
ရှေ့ က ချမ်းသာသွားတဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေက တိုင်းပြည်ကို ပြောင်းစေချင်ကြပြီ ။
နောက်က ငွေတူးနေတဲ့ တိုင်းမှုး တပ်မမှုးတွေကလည်း နေပါအုံးတဲ့ ။
ကျားကုတ်ကျားခဲ လုယူခဲ့ရတဲ့ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးကို ပုဂ္ဂလိလက်ထဲ ရောင်းတော့မယ် ။
ကြံ့ ဖွတ် ကဘဲဝယ်နိုင်မလား။
လောလောဆယ်တော့ ကတော်တွေ ဒူးနေရာဒူး တော်နေရာတော် မနေရလို့ 
ဗိုလ်မှုးကြီးအထက် အားလုံး ကတော်တွေ ဒူးနာပြီး ရောင်ကိုင်းနေသည် ။
၂၄ ဇွန်လိုင်လ ၂၀၁၀
ဘုရင်ကြီးသန်းရွေ ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်မှ ကြောက်သေးပါ စံအိမ်တော်ကြီးနေရာများ
စက်မှု(၁)ဝန်ကြီးအောင်သောင်း နေထိုင်တဲ့နန်းတော်သမျှ ခမ်းနားတဲ့ နေအိမ်အကြောင်းကို (Generals and their relatives watchers GRW စစ်အာဏာရှင်နှင့် အဆက်အနွယ်များအား စောင့်ကြည့်ဖော်ထုတ်ရေးအဖွဲ့) အတွင်းသိမှ ပေးပို့လာတာကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
အထက်ပါ အခြေအနေတွေကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့် မြန်မာပြည်က ဝန်ကြီး တစ်ဦးရဲ့ အနေအထား အခြေအနေတွေကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်....။ ဘယ်ကရတဲ့ ဝင်ငွေတွေနဲ့ ဘယ်လို သုံးဖြုန်းနေတယ် ဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးလစာ ၁၀သိန်းကျော် နဲ့ ဒီလိုခန့်မှန်းဘို့ မတက်နိုင်တဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ကို ဆောက်မယ် ဆိုရင်တောင် အနှစ် ၁၀၀ ကျော်နဲ့တောင် ဆောက်နိုင်ပါ့မလားပဲ...။ ဒီလိုလူမျိုးတွေက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ အာဏာကို လွဲပြောင်းပေးမပေးဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ... ဒီလိုဦးအောင်သောင်းလို လူမျိုးတွေကလည်း လွယ်လွယ်ကူကူ ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးပြီး အာဏာကို လွယ်လွယ်ကူကူ လွှဲပေးနိုင်ပါ့မလား...။ ဒီ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဘယ်သူ့အတွက် လုပ်တာလဲဆိုတာ အားလုံး စဉ်းစား ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒါဦးအောင်သောင်း အိမ်ပဲရှိပါသေးတယ်........။ ဒီထက် အဆင့်မြင့်တဲ့ အာဏာရှင်တွေ နေတဲ့ အိမ်တွေ အဆောက်အဦးတွေဆိုရင် ဘယ်လိုနေမယ် ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Mr Htay Tint at 12:17 AM0comments
ချုပ်ကိုင်မှုတွေ လွတ်လပ်သွားတဲ့ ကမ္ဘာ အပြင်ကို လိုက်ကြမလား
Posted by Mr Htay Tint at 3:02 PM0comments
﻿"ငါ ၏ တောက်ခေါက်သံများ" ဌေးတင့် (နယ်သာလန်) jul21 ,2010
အနှစ် ၇၀ ဆယ်ကျော် ကာလ တလျှောက်လုံး သေနတ်သံ နာကျည်းသံ ပြေးလွှားသံတွေက နားစည်အိမ်ကို ရိုက်ခတ်ပြီး ရင်ထဲကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နေရာယူလိုက်တယ် ။ အဆုတ်က သန့် ပြီး ဦးနှောက်ကို ပို့ လိုက်တဲ့ သွေးတွေထဲမှာ ပြင်းထန်နေတဲ့ ခံစားမှုတွေပါသွားတယ် ။ ဆက်တိုက် လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ ဦးဆောင်သူ အားမာန်အသံ။ နိုင်ငံတကာရဲ့ ဝိုင်းဝန်း ကူညီဟန်တွေက စာမျက်နှာတွေကတဆင့် မျက်လွှာကြည်ကို ဖေါက်ပြီး ဦးခေါင်းအနောက်နေရာမှာ မှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ် ။ ဘုရားသခင်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဝိဥာဏ်လှုံ့ ဆော်မှုတွေနဲ့ အတူ ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို သိစိတ် နဲ့ မသိစိတ်က အဖြေတခုပေးလိုက်တယ် ။ အသက်ကို ဝအောင်ရှု-အံကိုတင်းတင်းကြိတ်-လက်သီးကို နာနာဆုတ်ထား။ မနက်ဖြန်တွေ အများကြီးထဲမှာ အာဏာရှင် ဆိုတာ မပါစေရ ။ တိုက်ပွဲ ဝင်ကြ ...တဲ့။
တောက်တချက်ပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲ ခေါက်လိုက်ပါတယ် ။ လုပ်နိူင်တာတွေထဲက အများဆုံးပဲလေ ။ဒီထက် ဘာများလုပ်နိူင်မှာလဲ ။ ကျွန်တော်တို့ မှာ ရှိနေတာကဖေါင်တိန်တွေ စာရွက်တွေ..ဗုံတွေ ဆိုင်းတွေ ပတ္တလားတွေပဲလေ ။
နယ်ချဲ့ တိုက်ပွဲကို မြေအောက်က ကူညီခဲ့တယ် ။ဂျပန်တော်လှန်ရေးအတွက် နယ်လှည့်ကပြပြီး ဆက်သားလုပ်ခဲ့တယ် ။ လွတ်လပ်ရေး အရယူရေးအတွက် ပြည်သူတွေကို အနုပညာနဲ့ လှုံ့ ဆော်ပေးခဲ့တယ် ။ အခြေအနေယိုင်နေတဲ့ အင်္ဂလိပ်တပ်ထဲက အခြေအနေမဲ့စစ်ကျွန်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး သေနတ်တွေ ခိုးဝယ်တဲ့ ..အနံကြီး ကွင်းကျယ် ..ပညာတဝက် မောင်စောက ခိုးသေနတ်တွေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ် အပါအဝင် တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေကို လုပ်ကြံလိုက်ကြပြီ ။
ဒုတိယအကြိမ် တောက်တချက်ပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲ ခေါက်လိုက်ပါတယ် ။ ဒီထက်ဘာများလုပ်နိူင်မှာလဲ ။ကျွန်တော်တို့ မှာ ရှိနေတာကဖေါင်တိန်တွေ စာရွက်တွေ..ဗုံတွေ ဆိုင်းတွေ ပတ္တလားတွေပဲလေ ။
လွတ်လပ်ရေးရပြီး အချိန်ကစပြီး မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုအနူပညာတွေကို လွတ်လပ်စွာ ဖေါ်ထုတ်ခဲ့တယ် ။ ကွဲပြားနေတဲ့ ပါတီတွေ အကြားမှာ ဒေါသထွက်နေတဲ့ လူထုတွေ အကြားမှာ အနူပညာ စာပေနဲ့ဒေါသမီးတွေကို ငြိမ်းရန်ကြိုးစားခဲ့တယ် ။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ၊ညီညွတ်ရေး တရားတွေကို သီချင်းစာသားရေးခဲ့တယ်။ ဦးနု က အရူးကို ဘုံမြှောက်လိုက်တယ်။ ရိုးရိုး သာမာန် အရူးမဟုတ်ဘူး။ စာတိုက်စာရေး ။ ပိုက်ဆံကို ဖြတ်လမ်းက ရှာတဲ့ မြင်းလောင်း သမား။ များများလိုချင်ရင် သေနတ်ကိုင်ရမယ်ဆိုပြီး စစ်ထဲဝင်သွားတဲ့ နှာခေါင်းတို နေဝင်း။
၁၉၆၂ မတ်လမှာ အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီ ..တဲ့။ လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေ..လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံး ထောင်ထဲရောက်ကုန်ပြီ။ တတိုင်းပြည်လုံးက နိူင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်ငယ်တွေပါ မလွတ်ဘူး။ နိူင်ငံရေးအရ ဦးဆောင်သူ ကင်းမဲ့သွားတဲ့ မြန်မာပြည် ။တောက်ခေါက်သံနဲ့ အတူ သစ္စာစကား ရင်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ် ။ အနာဂါတ်တိုင်းပြည်အတွက် ဒီမိုကရက်တစ် လူငယ်တွေ မွေးထုတ်ရတော့မယ် ။
ပြည်သူ့ ကြက်ရင်ဘတ်က နို့ ကို စစ်မြွေက မြင်သလို..စစ်မြွေခြေထောက်ကိုလည်း ပြည်သူ့ကြက်က မြင်နိူင်တယ်လေ ။ မြွေမြွေခြင်း ခြေမြင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားမသုံးချင်ပါဘူး။အတွေးအခေါ် တဖက်တည်း ဖြစ်နေလို့ ပါ ။ စစ်တပ်ထဲက သူဌေးရူးတွေ အားနည်းချက်ကို လိုက်လံ စနည်းနာပြီး လူငယ်တွေကို သင်ပေးခဲ့တယ် ။
တတိယအကြိမ် တောက်တချက်ပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲ ခေါက်လိုက်ပါတယ် ။ ဒီထက်ဘာများလုပ်နိူင်မှာလဲ ။ ကျွန်တော်တို့ မှာ ရှိနေတာက ဖေါင်တိန်တွေ စာရွက်တွေ ဗုံတွေ ဆိုင်းတွေ ပတ္တလားတွေပဲလေ ။
၁၉၇၄ ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံပြီး မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ် စနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်..တဲ့။ ညာချတဲ့ ခေါင်းပေါင်း အတုကြီးတွေနဲ့ သတင်းစာထဲမှာ ယုတ်ပုံ ကြီးတွေမှ အကြီးကြီး... အသုဘ အခမ်းအနားလို ပါလာတယ် ။မဆလ အစည်းအဝေးတွေမှာ သေးကြိုပြီး ပေါက်လာပါ..တဲ့ ။
ရေကြည်အိုင်မှာ ချီးအိုး ရှိတယ်။ အင်းစိန် အပါအဝင် ထောင်တွေမှာ ချီးအိုး သေးအိုးရှိတယ်။ ဆူးလေမှာ ညစ်ပတ်နေတဲ့ အများမသုံးချင်အောင် ညစ်ပတ်နေတဲ့ အိမ်သာရှိနေတယ် ။ မဆလ အစည်းအဝေးခန်းမ တွေမှာ အိမ်သာ မရှိပါဘူး။ လက်နက် ဝှက်မှာ စိုးလို့ ..တဲ့ ။
စတုတ္ထအကြိမ် တောက်တချက်ပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲ ခေါက်လိုက်ပါတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ အချိန်မင်းကြီးက သူ့ တာဝန်အတိုင်း သွားနေခဲ့တယ် ။ ဒီထက်ဘာများလုပ်နိူင်မှာလဲ ။ကျွန်တော်တို့ မှာ ရှိနေတာက ဖေါင်တိန်တွေ စာရွက်တွေ ဗုံတွေ ဆိုင်းတွေ ပတ္တလားတွေပဲလေ ။
အာရှ စပါးကျည် ..ဆီကို ရေချိုး....စပါးတောင်လိုပုံ နေတဲ့ တိုင်းပြည်..... အဆင်းရဲဆုံး မွဲပြီ.....တဲ့။ လည်ပတ်နေတဲ့ ငွေသားတွေ စက္ကူစုတ် ဖြစ်သွားပြီ...တဲ့။ ရက်ပေါင်းများစွာ စဉ်းစားပြီး ရေးထားတဲ့ စာမူခတွေ မဆီမဆိုင် စာရေးလို့ မရတဲ့ စက္ကူစုတ် ဖြစ်ပြီ..တဲ့ ။ ကြေလွယ်လို့ အီအီးတောင် ကုန်းမရတော့ဘူး။ မျက်လှည့်ဆရာ နေဝင်းနဲ့မဆလ အဖွဲ့ သားများပြကွက်လေ ။
﻿ ကြဲထားတဲ့ နိူင်ငံရေး မျိုးစေ့လေးတွေ နေရာအနှံ့ အပင်ပေါက်လာကြပြီ။ ဒီမိုကရေစီ မမြင်ဖူးတဲ့ လူငယ်တွေ... မကျင့်သုံးဖူးသေးတဲ့ လူငယ်တွေ.... အခြေခံက ညီညွတ်ရေး ဆိုတာနဲ့ စလုပ်တော့မယ် ။ ရင်ထဲက နာမည်တခု ပေးလိုက်တယ် ။
ပဉ္စမအကြိမ် တောက်တချက်ပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲ ခေါက်လိုက်ပါတယ် ။ ဒီထက်ဘာများလုပ်နိူင်မှာလဲ ။ကျွန်တော်တို့ မှာ ရှိနေတာက ဖေါင်တိန်တွေ စာရွက်တွေ ဗုံတွေ ဆိုင်းတွေ ပတ္တလားတွေပဲလေ ။
ဆူးလေက စပြီး ရန်ကုန်တမြို့ လုံး..... ရန်ကုန်က စပြီး တတိုင်းတပြည်လုံးကို စစ်မြေပြင် သတ်မှတ်ပြီး၊ မြင်းသမား နေဝင်းတပ်တွေ...... ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလ မှာ ဒုတိယမ္ပိ ဂန်းစာမိ.. တတိယမ္ပိ ကျည်ဆံကြည့်...... အာဏာသိမ်း လူသတ်ပွဲ ကျင်းပလိုက်တယ် ။ တောက်တချက်ပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲ ခေါက်လိုက်ပါတယ် ။
ပါတီပေါင်းစုံ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးမယ်...တဲ။့ ပြည်သူ့ ကြက်ရင်ဘတ်က နို့ ကို .....စစ်မြွေကမြင်သလို၊ စစ်မြွေခြေထောက်ကိုလည်း ပြည်သူ့ကြက်က မြင်နိူင်တယ်လေ ။
ဒီတခါ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပြီး၊ မြေပေါ်က တိုက်ရမယ့် အလှည့်ရောက်ပြီ။ မှတ်ပုံတင်လိုက်တယ် ။ အဓိက ဦးဆောင်ပါတီကြီးက ဗိုလ်ချုပ်သမီး ပါတီလေ ။ ဘေးက ဝိုင်းရံပေးရမှာက ပါတီငယ်လေးတွေ ။ အတွေ့ အကြုံနည်းပြီး ထောက်လှမ်းရေး မက်လုံးတွေကြောင့်.. ပါတီဝင်တွေ လမ်းတဝက်မှာ လုပ်ကြံမှု ၊ငွေကြေးချမ်းသာမှု ၊ရေနစ်ပြီး ကျဆုံးကုန်ပြီ ။ တတိုင်းပြည်လုံး ပါတီတခုလုံး ဆွေမျိုးတစုလုံး မိသားစုအားလုံး မပါတော့ဘူး။ တကိုယ်ရည် တယောက်တည်း ချမ်းသာရေးဆိုတဲ့ မြင်းလောင်းသမား နေဝင်းမူ ကိုင်ကြပြီ။
ပြည်သူ့ ပါတီတွေထဲက နောက်ပိုင်း တက်လာတဲ့ လူထု ခေါင်းဆောင်အားလုံး၊ စစ်တိုင်းတပ်မ အမိန့် မလိုက်နာသူ အားလုံး၊ တရားမဝင်တဲ့..မရှိတဲ့ ဥပဒေ အမှုတွေနဲ့ထောင်ထဲပို့ လိုက်ကြပြီ ။
တဘက်သတ် စစ်တပ်က တစညနဲ့ ကြံ့ ဖွံ့ကို ရွေးပေးရမယ်..တဲ့။ အဲဒါ စစ်တပ်က လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီ အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲရေးမူ..
တောက်တချက်ပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲ ခေါက်လိုက်ပါတယ် ။ ဒီထက်ဘာများလုပ်နိူင်မှာလဲ ။ ကျွန်တော်တို့ မှာ ရှိနေတာက ဖေါင်တိန်တွေ စာရွက်တွေ ဗုံတွေ ဆိုင်းတွေ ပတ္တလားတွေပဲလေ ။
Posted by Mr Htay Tint at 12:27 AM0comments
ရေးတဲ့သူက အတင်းဆန်ဆန်ရေးပေမဲ့ ရတာလေးတွေရေးပြီးပို့ လိုက်တာကို တင်ပေးလိုက်တာပါ ။
ုဖြစ်နိုင်လား တကယ်လားဆိုတာ ကာယကံရှင်တွေ ဖြေရှင်းပေးကြပါ ။
တော်လှန်ရေးကောင်စီ ။ မဆလ ။ နဝတ ။ နအဖ ။ တလျှောက်လုံး ဒီလိုဘဲ လုပ်ကြံခဲ့တော့ ဒီလိုရေးတာ မဆန်းပါဘူး။
ငါးကြင်းကို ငါးကြင်းဆီနဲ့ ကျော်တယ်ဆိုရင် အဲဒီဆီပူတွေစုပြီး ထိရောက်အောင် ပြန်ပက်တတ်ဖို့တန်ပြန်တတ်ဖို့ လိုလိမ့်မယ် ။
အာရှတိုက်က နိုင်ငံတွေမှာ လူ ၁၀၀၀ ကို ရဲတယောက်နူံး ဆရာဝန် တယောက်နူံး ထားပါတယ် ။
သတင်းလောက အတွက်ပြည့်စုံဖို့လူ ၃၀၀၀ မှာ တယောက်နူံးရှိနေပါတယ် လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ် ။
၃၈ သန်းဆိုတာ သတင်းယူတဲ့ ဌါနဝန်ထမ်းတွေ လေ့ကျင့်ဖို့ နဲ့လစာငွေ ဘဲရှိပါသေးတယ် ။
ဗိုလ်မှုးကြီးကျော်စွာမင်း ကိုလည်း အမေရိကန်အကြောင်းဒီလောက်နားလည်ရင်
အမှန်တရားကို မြင်တတ်အောင် သင်ပေးဖို့စာရေးသူကစပြီး ခွင်အသစ်ဖွင့်သင့်ပါတယ် ။
မကောင်းတာကိုပယ် ကောင်းတာကိုကယ် ဆိုတဲ့ မြန်မာ့စကားပုံကို သုံးတတ်ရင်
မုန်တိုင်းပြီးရင် ငြိမ်သက်ဖို့အရှိန်ယူနေပါပြီ ။
သုံးမရတဲ့ အမှိုက်တွေ ရှင်းပြီး သုံးရတာတွေ သုံးပြီး ကျန်တာတွေ မျှဝေကြတာပေါ့ ။
တော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေထဲကို ရန်သူဝင်နိုင်တယ်တဲ့ လမ်းကြောင်း တခုအဖြစ်လက်ခံပြီး
အများသိအောင် တင်ပေးထားတာပါ ။
မြန်မာပြည်အတွက်ဆိုရင် တချိန်ချိန်တုံးက တချိန်ချိန်မှာ တွေ့ ကြရမှာပါ ။
အမုန်းတွေနဲ့ပြောမှာလား သူငယ်ချင်းချစ်တွေနဲ့ပြန်ပြောကြမလား
Posted by Mr Htay Tint at 11:48 PM0comments
Tue, 2010-07-20 01:16 — editor
"Southeast Asian nations should press the Myanmar government to protect the rights to freedom of expression, peaceful assembly, and association throughout the elections period and beyond," the London-based watchdog said inastatement. Amnesty International made the comment ahead of annual talks by foreign ministers of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), beginning in Vietnam on 19 July.
Burma/Myanmar is situated at the juncture of three significant zones in Asia. It is bordered by East Asia's China, Southeast Asia's Thailand and Malaysia and South Asia's India and Bangladesh.
In March 1962, the late general Ne Win seized power from prime minister U Nu's civilian government and cleverly followed U Nu's foreign policies of strict nonaligned status and neutrality. Although Ne Win was responsible for countless human rights abuses, the international community took little notice during the cold war. At the time, Burma's Southeast Asian neighbors were unstable. Vietnam and Cambodia faced times of turbulence. But U Nu's foreign policies protected Ne Win running the country's economy into the ground under his Burmese Socialist Programme Party.
Despite considerable financial aid from countries such as Japan, Burma sank to the level ofa'least developed country'. Corruption and mismanagement decayed the country's potential growth.
Debts mounted up. Human rights abuses were out of control. Civil war spread out up to Burma's ethnic areas. Soldiers are experienced at warfare but are unable to manage economics. They made policy errors and unpalatable decisions, which ultimately brought about the 1988 prodemocracy people’s uprising. Ne Win’s namesake socialist regime was totally overthrown.
But,anew military junta, State Law and Order Restoration Council, emerged on 18 September 1988, with Ne Win continuing to pull strings behind the curtain. The regime refused to respect the results of the 1990 elections and while calls were made foraUnited Nations Security Council resolution on Burma, China and Singapore, Cuba and Mexico opposed the move at that juncture.
As Burma's security situation worsened, the junta took advantage to get protection by joining into ASEAN in 1997. Since then it has continued to discomfit the regional grouping. While activists called for ASEAN to act on Burma, members chose constructive engagement to try to encourage reforms.
The Treaty of Amity and Cooperation, signed at the First ASEAN Summit in February 1976, declared that political and security dialogue and cooperation should aim to promote regional peace and stability.
Regional resilience was to be achieved through cooperating and the principles of self-confidence, self-reliance, mutual respect and solidarity.
But ASEAN started facing strong calls for action on Burma on May 30, 2003. The association was called on to address human rights concerns in the region, including allegations of grave human right violations at Dapeyin in Upper-Burma where Aung San Suu Kyi and her entourage were ambushed by the military thugs. Actually, it wasacruel plan to assassinate Aung San Suu Kyi, and there were enough evidences and eyewitnesses.
However, in 2003 summit, the ASEAN only issuedatoothless statement calling for the early release of Aung San Suu Kyi and other NLD members. Burma’s rogue junta disregarded the ASEAN’s calls as usual up to present day.
The most evil move is that without honoring the 1990 election result, the commander-in-chief of the junta has been planning to launch another election in this year. It’sakind of immoral act insulting the whole nation and its people by scrubbing out the 1990 people’s ballots. The majority of the population who want valid change cannot forget the immorality of the Generals. The junta’s thoughtlessness toward the future of Burma obviously startsacivil strife in the poverty-stricken country since the unjust election laws released.
Currently, Burma is atacrucial political turning point. While the military regime wants to keep up its power via the proposed sham 2010 elections, the people, who long for real change, are demanding basic human rights such as freedoms of expression and association. But the junta seems as stubborn asamule and is in no mood to allow civil liberty.
The military regime has intentionally barred pro-democracy leader Aung San Suu Kyi from running in the upcoming elections and forced her party to expel her underanew election law unveiled on March 10. This is causing serious political disorder in the military-ruled country. The Political Parties Registration Law made by the junta prohibits anyone convicted byacourt of law from joiningapolitical party and thereby disqualifies them as candidates. It also instructs parties to oust members who are “not in conformity with the qualifications to be members ofaparty,”aclause that may well force Suu Kyi’s exclusion.
Following the 18th ASEAN-EU Ministerial Meeting in Madrid on May 26, the European Union and the Association of Southeast Asian Nations called on Burma’s military rulers to make sure that this year's planned election is trustworthy, transparent, democratic and inclusive.
Inajoint statement, the EU and ASEAN ministers said they believed that the early release of those under detention, including the main opposition leader, Aung San Suu Kyi, would contribute to making the election more inclusive and help bring aboutapeaceful political transition.
The EU and ASEAN ministers also encouraged the Burmese regime to continue to engage inameaningful manner with the international community. But, in view of people of Burma, the said EU-ASEAN Joint statement is justaformal and powerless voice.
For, they have heard over thousand times such formal toothless joint-statements without any action. Both regional groups seem as if supporting the junta’s sham constitution and ‘namesake’ election in 2010. In fact, they must condemn and warn the junta in order to repeal its unjust and undemocratic constitution.
The key question is that the junta’s constitution and election laws not only prevent the participation of main opposition parties but also ignore the ethnic people’s political aspirations. Since, Burma isamember of ASEAN, it may beacrucial challenge to the grouping. It is required to pressure convincing its immoral member turning along the right path in line with the organization’s responsibility.
According to Amnesty International, the junta’s electoral laws blatantly violate freedom of expression, and the election commission has issuedavague ban on canvassing which harms "security".
Amnesty International also pointed out, more than 2,200 political prisoners continue languishing behind bars in Myanmar (Burma). It is double the number since the start of the mass peaceful anti-government protests of August-September 2007 -ahuge indictment of the grim human rights situation there.
“Under Electoral Laws enacted in March, no political prisoner can take part in the elections, including Daw Aung San Suu Kyi. The same laws also prohibit them from membership in any political party. ASEAN should unequivocally call for the immediate and unconditional release of all prisoners of conscience at the Ministerial Meeting, something they conspicuously failed to do at the organization’s summit in Ha Noi in April”, AI says in its statement.
The ASEAN Foreign Ministers are to meet from 19 – 23 July in the Vietnamese capital of Ha Noi for the 43rd ASEAN Ministerial Meeting (AMM). Discussions on ASEAN community building, the regional architecture and the implementation of the ASEAN Charter are on the agenda of the AMM on 19-20 July. The five-year Work Plan of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) is also expected to be approved.
Unavoidably, this existing AMM is responsible to look into the situation of elections in the military ruled member country. ASEAN must especially urge Myanmar to respect freedom of expression, freedom peaceful assembly, and freedom association to be safeguarded for all citizens in line with international standard during the upcoming elections. It is not adequate for ASEAN to stand still onawait-and-see position. ASEAN member countries must also be geared up to protest forcefully if individuals are under threat and detained for their peaceful political views and activities in the run-up to the elections.
It is essential that ASEAN has to get hold of this opportunity to strive towards the awareness of long unsettled human rights issues in Myanmar. Failure to sort out those human rights challenges, including electoral frauds, in Myanmar/Burma will ruin ASEAN’s international fidelity and image.
Zin Linn is an exile freelance journalist from Burma and vice-president of Burma Media Association which is affiliated with the Paris-based Reporters San Frontiers.
Posted by Mr Htay Tint at 12:46 AM2comments
တတိုင်းပြည်လုံး လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး အာဏာရှင်ကို
တချိန်ထဲ တပြိုင်ထဲ ဆန္ဒပြ ကျွေးကျော်ဖို့ အချိန်ယူရပြီး
အဲဒီ အဆင့်ကို ရောက်ဖို့ 
တချိန်ကြရင် သေချာပါတယ် ။
မိမိကိုယ်ကို တိုင်းပြည်ကယ်တင်ရှင် အမည်တွေခံယူပြီး
ပြဿနာကို ပြေလည်အောင် လေ့လာမှု မလုပ်ခဲ့ပါဘူး
ကပ်ဖါး ရပ်ဖါး တင်သန်းဦးတို့ လို
အရပ်ပျက် ငါးစိမ်းသည် အဆင့်သာသာ
သတင်းပို့ တဲ့ စကားတွေကို နားထောင်ပြီး
ကျည်ဆံတွေနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖြေရှင်းခဲ့ကြတယ် ။
ယနေ့ အချိန်အထိ ပြဿနာနဲ့ အဖြစ်မှန်နဲ့ 
ငြိမ်းချမ်းရေး အဖြေအတွက် ပြင်ဆင်မှုကို မတွေ့ သေးပါဘူး ။
ပြည်ပက ကိုယ်ကျိုးရှာ စီးပွားရေးသမားတွေ ပေးတဲ့
လက်ပူတိုက်နည်းတွေ ဟာ အဖြေမဟုတ်ပါဘူး ။
၁၀နှစ်သား သမီးတွေ တည်ဆောက်တာက ပိုပြီးခိုင်သေးတယ် ။
၁၉၇၄ တုံးက ရပ်ကွက်မြို့ နယ်တွေ က လေးစားသူ
ကျောင်းဆရာ တွေနဲ့ သူကြီးတွေ စီးပွားရေးသမားတွေ ကို
အခုလည်း ၂၀၁၀ မှာ ဒီလမ်းဟောင်းကိုပြန်သွားဘို့ကြံစည်ပြန်ပြီ။
လိမ်ချင်ရင် ဒီလိုပိပိရိရိ လိမ်ပြလိုက်ပါ ။
ပြည်ပတွေမှာ လမ်းဘေးက လုပ်ငန်းတွေတောင် ပိရိပြီး လူတိုင်းလက်ခံမှ ထမင်းဝတယ် ။
ဒီတခါတော့ ပြည်ပကို လိမ်လို့ မရတော့ဘူး
လှိုင်ခေါင်းတူး စီမံချက်တွေနဲ့ 
သူဌေးဖြစ် ဒမြဆန်ဆန်လုပ်ကြပြန်ပြီ ။
ငြိမ်းချမ်းရေး အတုပေးထားလို့ 
စစ်ဆင်ရေး စရိပ်က မသေချာတော့ဘူးလေ ။
မသေချာတဲ့ လေကို အသုံးချတတ်ရင် ဒီပုံကိုကြည့်
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ လက်ရှိ စစ်အစိုးရကို အလိုမရှိကြပါဘူး။
လူတိုင်းပါဝင်နိူင်ဖို့အခြေအနေမပေးသေးပါဘူး ။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ သတင်းလေးနားထောင် လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ
စုလေပေါရင်း အတင်းချနိုင်ငံရေးအဆင့်က မတက်နိုင်သေးပါဘူး
လေများပြီး လေထဲအကျဉ်းကျ ကုန်ပြီ
နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်လာတော့ အလေ့အကျင့်ဖြစ်လာပြီး
ပြည်ပကိုတောင် ယဉ်ကျေးမှု အဖြစ်ဝင်လာပါပြီ။
အစိုးရထုတ် သတင်းစာနဲ့ The Voice တို့လို
လက်ကိုင်တုတ် ဂျာနယ်တွေကို မဖတ်ကြဖို့ မဝယ်တော့ဖို့
ကျွန်တော်နဲ့ နီးစပ်တဲ့လူတွေကို စပြီးစည်းရုံးဖို့ပါပဲ။
မွေးနေ့ ပွဲတွေ ဘုရားကိုးဆူပွဲတွေ
စတဲ့ လူအနည်းငယ် စုစည်းနိူင်သော
ပြည်ပမှ ငွေစအနဲငယ် ကူညီကြပါ ။
လက်တွေ့ အလုပ်လုပ်ကြ ရင်
တဦးခြင်းတန်ဖိုးတွေ တက်လာကြပြီး နောက်ဆုံတနေ့ 
စစ်တပ် အသိုင်းအဝိုင်းက တန်ဖိုးမဲ့ သွားမှာပါ ။
( save-Burma ပေးပို့ လာသောစာကို ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်တာပါ )
ကြည့်တော့ကြည့် လိုက်ပါတယ် ။
မှတ်မိတဲ့ လှုပ်ရှားမှုနေရာ တွေက မတူပါဘူး ။
မျက်လုံးဖြင့် အတုခိုးပြီး ထွက်ပေါ်လာသောအက
Posted by Mr Htay Tint at 12:59 AM0comments
Foreign investment in Myanmar tumbles
Foreign investment in Myanmar down last year as China's figure falls, sanctions continue
On Wednesday July 14, 2010, 6:06 am EDT
YANGON, Myanmar (AP) -- Foreign investment in Myanmar, one of the world's poorest and most authoritarian countries, dropped more than two thirds last fiscal year as Chinese investment tailed off and
economic sanctions on the military-ruled nation continued, according to government figures.
A statistical report from the country's Ministry of National Planning and Development that was seen Wednesday said foreign investment in the 12 months through March 2010 fell 68 percent to $315 million from $985 million the previous year.
The main reason for the drastic drop was because of China's unprecedented investment in Myanmar in 2008-2009. It spent $855.9 million in the mining sector, accounting for 87 percent of total foreign investment. China signed an agreement with resource-rich Myanmar for nickel-production in 2008.
Up-to-date information on Myanmar's economy is difficult to come by and the few official figures that become available are often regarded as unreliable. Thoughasubstantial gas exporter, the revenues barely register in the government's accounts, suggesting the cash is diverted into projects favored by its ruling generals, according to Burma Economic Watch,agroup based at Australia's Macquarie University that studies Myanmar's economy.
Myanmar, also known as Burma, saw seven new foreign investments during 12 months, four of which were in its oil and gas sector. These resource extraction investments -- three from Malaysia and one from the United Arab Emirates -- were worth $278.6 million and accounted for more than 88 percent of the total investment during the fiscal year.
Thailand spent $15.25 million in the hotel and tourism sector, China put $15 million into the mining sector and Hong Kong added $6 million to the manufacturing sector during 2009-2010, the government report said.
The United States and the European Union have imposed economic sanctions against Myanmar to pressure the military government to improve human rights and release detained pro-democracy leader Aung San Suu Kyi. Sanctions, including banning U.S. companies from investing in Myanmar and banning Myanmar exports to the United States, were first imposed in 1997.
Since Myanmar liberalized its investment code in 1988, it has attracted large investments in hydroelectric power, oil and gas and mining -- mainly from neighboring countries such as Thailand.
Meanwhile, Myanmar's exports rose 12 percent to $7.6 billion in year through March from $6.78 billion the previous year, according to the report. Imports dropped 8 percent to $4.18 billion from $4.54 billion.
The government report said that natural gas exports, which accounted for about 38 percent of all export revenue, increased9percent to $2.56 billion from $2.35 billion. Myanmar gas exports go to neighboring Thailand.
Myanmar is believed to havealarge amount of unmeasured trade, mostly goods smuggled across its land borders, especially with eastern neighbor Thailand and northeastern neighbor China.
Posted by Mr Htay Tint at 1:06 PM0comments
အထူးသံကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သော အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးဖြစ်မြောက်မူကော်မီတီ ဖွဲ့စည်းမှသာလျှင်
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြသနာကို ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံများက တော်တော်ကြီး နားလည်ကြပါသည်။ သို့အတူ နိုင်ငံတကာမှ သမတ တွေ အစိုးရ တွေက ပိုသိကြသည်။ နောက်ဆုံးမှာ လုံခြုံရေးကောင်စီထိတိုင် ရောက်သွားပြီ ။
ဗီတိုအာဏာဖြင့် ပယ်ချသောကြောင့် တရုပ်နှင့် ရုရှားနှစ်နိုင်ငံစလုံးအကြောင်းကိုလည်း နောကြေနေကြပါပြီ။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာဖိအားများကို လုပ်စရာမလိုတော့ပြီဟု တချို့ က ယေဘူယျ သတ်မှတ်ကြပါသည်။
ပြည်တွင်းမှ ပြသနာများကို ပြည်တွင်းမှပင် ရှင်းကြရန်လိုသည်ဟု သိနားလည်ကြသေးသည်။ စင်စစ်ပြည်သူ့အားသည် ပြည်တွင်းမှာပင် ရှိသည်ဟု ဆိုကြပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် နိုင်ငံတကာအပြင်တွင် ရောက်ရှိနေထိုင်ကြပါသည်။
အဖွဲ့အစည်းတွေ ဖွဲ့စည်းပြီး လှုပ်ရှားကြပြီးပါပြီ။ တချို့ မှာ စင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီး လှုပ်ရှားကြပါသည်။
တချို့ က ကုလသမဂ္ဂမှ ဖယ်ရှားရန် စစ်အစိုးရကို နှင်ထုတ်နိုင်ရန် ကြိုးစားကြပြီးပါပြီ။
နောက်ဆုံးမှာ နိုင်ငံတကာစစ်ရာဇ၀တ်ရုံးမှာ စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်အဖြစ် တရားစွဲဆိုနိုင်ရန် တောင်းဆိုကြပါပြီ။
အားလုံးသောပြသနာမှာ စစ်အစိုးရကို ဖြုတ်ချရေးဖြစ်ပါသည်။
ကံတရားသည် ကျွန်တော်တို့အပေါ် မျက်နှာသာ မပေးလာသေးပါ။
မည်သူမျှ ထိုင်၍မနေကြသည်မှာတော့ သိသာနိုင်ပါသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ရန် အပြင်းအထန်ကြိုးစားနေကြပါသည်။
နိုင်ငံတကာမှ မသိအမှတ်မပြုဟု ဆိုသောအသံတွေကိုလည်း ကြားနေရပြီ။
ကျွန်တော်တို့မှာ ယခုမှမဟုတ် ။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်း သပိတ်မှောက်ကြသူများဖြစ်သည်။
ခုတော့လည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ကြရန် ကြိုးစားသူများဖြစ်ပါသည်။
တနေ့က အင်တာနတ်ပေးပို့သော သတင်းတခုမှာ
အဖွဲ့အစည်းတခုကို ရည်ရွယ်ပြီး တိုက်ခိုက်ရေးသားလာသော စာတပုဒ်ကို ဖတ်မိပါသည်။
အောက်တန်းကျလှသော ယင်းစာရေးသူကို ပြန်၍ မချေပချင်ပါ။
သို့သော် ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံများသည် နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့်
မည်သည့်အတွက်နှင့် တိုက်ခိုက်ဝေဖန် နေရသနည်းဟု စဉ်းစားမိပါသည်။
ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များက ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပါတ်သက်၍၄င်း၊
စစ်အစိုးရကို ဖြုတ်ချရေးနှင့် ၄င်း၊
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအား စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်အဖြစ် ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းရှိပါက ပြန်လှန်ချေပ ရေးသားနိုင်ကြပါသည်။
ယခုမူ ပြည်ပမှာနေထိုင်ပြီး ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံများအား ဝေဖန်ပုတ်ခတ်ရေးသားနေခြင်းမှာ လွန်လွန်းလှပါပြီ။
ထို့ကြောင့်လည်း ကျွန်တော့်မှာ ဆောင်းပါးများကို ရေးသားပြီး ဘလော့တွေ ၀ပ်ဆိုက်တွေမှာ မရေးသားချင်တော့။ ရန်သူစစ်အစိုးရသိသွားရအောင် ပြည်ပကသတင်းပေးတွေ အများကြီး ရှိနေကြပါပြီ။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဖျက်ဆီးရေးနည်းလမ်းထဲက တခုမှာ နိုင်ငံရေးပေါ်လီစီ တခုကို အလျှင်အမြန်အကောင်အထည် ချမှတ်ရေးဖြစ်ပါသည်။ ယင်းနည်းလမ်းမှာ သည်သို့ဖြစ်သည်။
( ၁ ) ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံများထဲမှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူး သံတမန်ကိုယ်စားလှယ်များ အဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်ထားရေး ။
( ၂ ) အထူးသံကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သော စင်ပြိုင်သို့မဟုတ် ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းဖြစ်မြောက်ရေးကော်မီတီ ဖွဲ့စည်းရေး။
( ၃ ) ယင်းကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့မှ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများမှ တက်ကြွသူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေး ။
( ၄ ) အထူးသံတမန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အမြန်ဆုံး ( ၃ ) လအတွင်း အကောင်အထည်ဖေါ်ရေး။
ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံများမှ သံတမန်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းကို မိမိတို့နိုင်ငံမှ လူအများယုံကြည်ထောက်ခံသော ပုဂ္ဂိုလ်များအား ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပေးရန်လိုပါသည်။
ကောင်းမွန်သော တနည်းအားဖြင့် နိုင်ငံတကာအစိုးရများမှ သိရှိကြသော
တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကို ခန့်အပ်ရန်လိုသည်။
ယင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၏ လုပ်ငန်းစဉ်မှာ စင်ပြိုင် အစိုးရဖွဲ့စည်းရေး
သို့မဟုတ် ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေး ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မီတီ ဖွဲ့စည်းရန်လိုပါသည်။
ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မီတီက တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်မှသာ
စင်ပြိုင်သို့မဟုတ် ကြားဖြတ် အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သံကွင်းဆက်ပမာ လှုပ်ရှားနိုင်ရေးအတွက် လှို့ ဝှက်ဖွဲ့စည်းရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့ဖွဲ့စည်းခြင်းကို မည်သူတဦးတယောက်ကိုမျှ အသိပေး အကြောင်းကြားရန် မလိုအပ်ချေ။
မီဒီယာ သမားများထံသို့လည်း အသိပေးရန်မလိုချေ။
သို့သော် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများ၏ လွှတ်တော်အမတ်များ။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် တင်ပြစဉ် မိမိတို့ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
များကို ပြုစုပြီး သက်ဆိုင်သူများ သိရှိစေရန် ပေးပို့ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤသည်မှာ နိုင်ငံတကာ သံခင်းတမန်ခင်း လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သာ ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက် ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးသံတမန်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်မှာ ( ၃ ) လအတွင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
အစိုးရဖွဲ့စည်းဖြစ်မြောက်ရေးကော်မီတီ ဖွဲ့စည်းရခြင်းအကြောင်း ။ ။။။။
ကျွန်တော်တို့မှာ အခါခပ်သိမ်း အရပ်သားအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးကို တောင်းဆိုဆန္ဒပြကြပြီးဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့၏ မြန်မာနိုင်ငံအရေးကို ပိုမိုသိရှိကြသော အစိုးရများကို ပြောစရာစကား မရှိတော့။
ကျွန်တော်တို့ တိုက်ပွဲကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်မြှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လိုပါသည်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂနှင့် ပြောစရာမလိုတော့။ လုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် ပြောစရာမလိုတော့ ။
အဓိက လိုအပ်သည်မှာ ကျွန်တော်တို့ သက်လုံကောင်းဖို့ လိုပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဗြိတိန်အစိုးရနှင့် စကားပြောစဉ် တနှစ်အတွင်း လွပ်လွပ်ရေးပေးရမည် ဆိုသော စကားနှင့် စပါသည်။
ရရင်ရ မရရင်ချ ဆိုသောစကားသည် နိုင်ငံရေးစကားဖြစ်ပါသည်။
ယခုလည်း ကျွန်တော်တို့မှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို
စစ်အစိုးရမှ ပြုလုပ်ပြီး အစိုးရဖွဲ့လျှင် နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်မပြုဟု ပြောဆိုနေကြပါသည်။
ယင်းမှာ ကျွန်တော်တို့၏ အထူးသံတမန်များက ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။
စစ်အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အရပ်စားအစိုးရကို အသိအမှတ်မပြုဆိုလျှင်
( ၂ ) ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံများမှ ဖွဲ့စည်းမည့် စင်ပြိုင်အစိုးရ
သို့မဟုတ် ကြားဖြတ်အစိုးရကို အသိအမှတ်ပြုမည်လားဟု မေးစရာသာ ရှိပါသည်။
အသိအမှတ်ပြုမည်ဟု ပြောသောစကားကို ပြည်တွင်းသို့ ကျွန်တော်တို့ကစင်ပြိုင်
သို့မဟုတ် ကြားဖြတ်အစိုးရတွင် ပါဝင်မည့်သူများအား လှို့ ဝှက် သတင်းပေးပို့ရုံသာ ရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် အမေရိကန်အစိုးရအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ အတွက်
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးသံတမန်ကိုယ်စားလှယ်များ အဖွဲ့ကို
ဤသည်မှာ ကျွန်တော်တို့၏ နိုင်ငံရေးပေါ်လီစီတခုဖြစ်ပါသည်။
ဤ ပေါ်လီစီကိုကျင့်သုံးသည့်အခါ မည်သူမျှ အာဏာရာထူး အကျိုးခံစားရရှိမည် မဟုတ်။
တချိန်တည်းမှာ ယုံကြည်သူများက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြပြီး
မယုံကြည်သူများက မိမိတို့၏ ပေါ်လီစီများနှင့် အမြန်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်။
၇- ၇- ၂၀၁၀
ဆောင်းပါးရှင် - ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ်
ကျွန်တော့် အနေဖြင့် အခု တစ်လော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှာ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်
ယခင် အတွေ့အကြုံနဲ့ ယခု လက်ရှိ နေပြည်တော်လို့ ခေါ်တဲ့
ကြပ်ပြေး မြို့တော်က သူငယ်ချင်းများရဲ့ 
ပေးပို့နေတဲ့ သတင်းများကို အခြေခံကာ သုံးသပ် တင်ပြချင် ပါတယ်။
၁၉၈၈ ခု စက်တင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှာ AD လမ်းမှာ နေတဲ့
ဗိုလ်ချုပ် နေ၀င်းရဲ့  အိမ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အရေးပေါ် အစည်းအဝေး
တစိတ်တပိုင်းကို အရင်ဦးဆုံး ပြောပြချင် ပါတယ်။
အဲဒီ အစည်းအဝေးမှာဦးနေ၀င်းနဲ့ သူ့ရဲ့  လက်ရုံးတင်မဲ့
လက်သားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဦးစန်းယု၊ဦးအေးကို၊ ဒေါက်တာ မောင်မောင်၊
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရကျော်ထင် အပါအ၀င်
ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
လက်ရှိတပ်မတော်ရဲ့ တာဝန်ရှိသူ တွေထဲမှာ ထိုစဉ်က စစ်ဦးစီးချုပ် ဖြစ်တဲ့
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်နဲ့ တပ်မတော် ထောက် လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဗိုလ်မှူးကြီး ခင်ညွှန့်တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါတယ်။
အဲဒီ အစည်းအဝေးမှာ ဦးနေ၀င်းကနေပြီး
“စောမောင်နဲ့ ခင်ညွှန့် တိုင်းပြည်ရဲ့ 
အခြေအနေ ကို အားလုံး သိအောင် ရှင်းပြ” လို့ အမိန့်ပေးတော့
ဗိုလ်မှူးကြီး ခင်ညွှန့်က တစ်နိုင်ငံလုံး ဆူပူအုံကြွပြီး အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား လုံးဝ
ရပ်ဆိုင်းနေပြီ ဖြစ်တာရယ်၊ ကုန်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးရုံးမှာ ပြည်သူလူထုနဲ့
စစ်တပ် နားလည်မှု ရသွားတာရယ်၊
တပ်မတော်တွင်းမှာ စစ်သည်များ မကြေမနပ်
ဖြစ်ပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေတာတွေ၊
ခေါင်းဆောင်များရဲ့  လှုပ်ရှားမှုတွေ၊
ဖမ်းဆီးရမိမှု အခြေအနေ အလုံးစုံကို
တင်ပြခဲ့ တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဦးနေ၀င်းက
ဗိုလ်မှူးကြီး ခင်ညွှန့်ရဲ့ တင်ပြချက်အပေါ်
တက်ရောက် နားထောင်ကြတဲ့ အစိုးရခေါင်းဆောင်များရဲ့ 
သဘော ထားကို မေးခဲ့ပါတယ်။
မည်သူ တစ်ဦး တစ်ယောက်ကမျှ ထုံးစံအတိုင်း ဘာသဘောထား မှတ်ချက်ကိုမှ
ဦးနေ၀င်းရဲ့  ရှေ့မှာ မပေးရဲ ခဲ့ကြပါဘူး။
ဒီတော့ ဦးနေ၀င်းက မဆလ ပါတီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ပြည်သူလူထု ထောက်ခံမှု၊ ဘယ်လောက်
ရာနှုန်းလောက် ရှိနိုင်လဲဆိုတာကို တက်ရောက်လာတဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကို မေးတော့ သူတို့က အဲဒီအချိန်မှာ
တပ်မတော်သားတွေကို သူတို့ရဲ့  ထောက်ခံမဲလို့ အပိုင် တွက်ထားပုံ ပေါ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တပ်မတော် မိသားစုနဲ့ မဆလ ပါတီဝင် အင်အားစုတွေကို
ပေါင်းပြီးတော့ ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှု အနည်းဆုံး
၆၀% အထက်မှာ ရှိကြလိမ့်မည်လို့ တွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီနောက် ဦးနေ၀င်းက အဲဒီ အစည်းအဝေးမှာ
လက်ရှိ အာဏာယူထားတဲ့ လူကြီးတွေကို
“မင်းတို့ စောမောင်နဲ့ ခင်ညွှန့်တို့ကို အာဏာ လွှဲပေးလိုက်တော့” လို့
နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့ဆိုပြီး ဖွဲ့ဖို့ရယ်
ဥက္ကဋ္ဌက စောမောင်၊ အတွင်းရေးမှူးက ခင်ညွှန့်ကိုထားပြီး
တပ်မတော်က ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ စစ်တိုင်းမှူးတွေကို အဖွဲ့ဝင်တွေ
ထားပြီး ဖွဲ့ဖို့ ဦးနေ၀င်းက အမိန့်ပေး ခဲ့ပါတယ်။
အာဏာလွှဲယူပြီး စစ်အစိုးရရဲ့  ကြေငြာချက် လမ်းညွှန်မှု အနေနဲ့ ကတော့
ဒို့ တာဝန်အရေးသုံးပါးကို အခြေခံပြီး
ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ရပ်ကို ကျင်းပမည် ဆိုတဲ့
Guide Line အား ဦးနေ၀င်းက အဲဒီ အစည်းအဝေးမှာ ချမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဦးနေ၀င်းရဲ့  Guide Line တွေကို စာသားအဖြစ် ရေးပေးခဲ့ရသူက ဒေါက်တာ
အစိုးရသစ်ရဲ့  ပြည်သူလူထုထံ ပြောကြားသည့်ကြေငြာချက်ကို
အဲဒီ အစည်းအဝေးမှာဘဲ ဒေါက်တာ မောင်မောင်က လက်ရေးမူနဲ့
န၀တ ဖွဲ့စည်းတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
စောမောင်နဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး ခင်ညွှန့်တို့က အဲဒီ အစည်းအဝေးမှာဘဲ
ဘယ်သူတွေပါဝင် ဖွဲ့စည်းမည် ဆိုတာကိ
ဦးနေ၀င်းကို တင်ပြခဲ့ ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ လက်ရေးမှုတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာရွက်တွေကို
ထိုစဉ်ကတပ်မတော် ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးသန့် (နောင်ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး)
ဒုတိယ တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး သန်းထွန်း (နောင် ဘဏ္ဍာရေး ဒုတိယ ၀န်ကြီး)
တို့ (၂) ဦးက မြန်မာ့ အသံကို သွားရောက်ပြီး
စက်တင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့ ညနေ (၄) နာရီမှာ
အဲဒီ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမိန့်
ကြေငြာချက်တွေ ဆက်တိုက် ထုတ်ပြန်လာပြီး နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့
ပြည်သူလူထုတွေကို ဆူပူ ဆန္ဒပြ နေရာက
ရွေးကောက်ပွဲ လမ်းကြောင်းပေါ် တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ အချိန်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင်အနေနဲ့ အမှန်တကယ်ဘဲ
ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးရင် ပြည်သူလူထုကို အာဏာလွှဲ ပေးမယ်ဆိုတာကို
ကျွန်တော်တို့ သိသလောက် ဗိုလ်ချုပ် စောမောင်
အဲဒီအချိန်က ယုံကြည်ခဲ့တာက တစညနဲ့ စစ်တပ်ကို ထောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံရေး
ပါတီတွေသည် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှုံးရင်တောင်မှ အပြတ်အသက် မရှုံးနိုင်ဟု
ဒါကြောင့်လဲ ရွေးကောက်ပွဲကို သမာသမတ်နဲ့ လုပ်ဖို့
လက်အောက်ကို အမိန့် ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင် မသိတာ ကတော့
တစည ပါတီကို ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်
မုန်းတီးနေတယ်ဆိုတာနဲ့ တစည အမတ်လောင်းတွေ
Golf ရိုက်ပြီး စည်းရုံးရေး ဆင်းနေတာတွေကိုပါ။
ဦးနေ၀င်းနဲ့ အစည်းအဝေးမှာ သူ့ရဲ့  ဆရာ သမား မဆလ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ 
ပြောစကားတွေကို ယုံကြည်မိ ခဲ့တာတွေ ကြောင့်ဖြစ် ပါတယ်။
ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကို ကျောထောက် နောက်ခံ လုပ်မဲ့
အစိုးရကသာ အာဏာရ လိမ့်မယ်လို့သူ့အနေနဲ့ လျော့တွက်ခဲ့ပါတယ်။
အားလုံး သိကြတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့ န၀တ တဖွဲ့လုံး
မျက်လုံးပြူး မျက်ဆံပြူး ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကြိတ်မနိုင် ခဲမရ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
ဒီအထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်တဲ့
အမတ်အချို့ က စစ်တပ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်၊
သတ်ခဲ့သူတွေ ဖေါ်ထုတ် အရေးယူရမယ်၊
အဆင့်နဲ့ အထက် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဖယ်ရှားပစ်ရမယ်၊ စတဲ့
အချက်တွေကိုကြွေးကြော် လာခဲ့တာ တွေ့ရှိလာပါတယ်။
စစ်တပ်အတွင်းမှာလဲ တပ်မတော်ရဲ့ 
အနာဂါတ် ဘယ်လို ဖြစ်လာနိုင်မလဲ ဆိုတာကို စိုးရိမ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင်ကိုလဲ ကျန်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ
အပါအ၀င် န၀တ အဖွဲ့ဝင် တချို့က ဖိအားပေးလာခဲ့တာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
အဲဒီ အချိန်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ
ပိုမိုရင်းနှီးတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ချစ်ဆွေ၊ ဗိုလ်ချုပ် ဖုန်းမြင့်၊
ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်ခင် (ရေ)၊ ဗိုလ်ချုပ် တင်ထွန်း (လေ)၊ ဗိုလ်ချုပ်
မြင့်အောင်၊ ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းကြည်၊ ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ဘ၊ ဗိုလ်ချုပ်
မောင်အေး၊ ဗိုလ်ချုပ် တင်ဦး တို့ရဲ့  ဖိအားကိုလည်း
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင် ရခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင် အရက်တွေ
ဖိသောက်လိုက်၊ ပုတီးစိပ်လိုက်နဲ့ ဂယောင်ချောက်ခြား ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
NLDကလည်း ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်တဲ့ အမတ်တွေ စုပြီး စစ်တပ်ကို အာဏာလွှဲပေးဖို့
ဂန္ဒီ ခမ်းမမှာ စုဝေးပြီး တောင်းဆိုမဲ့ ကြေငြာချက် စာတမ်းတွေ ထုတ်မယ်လို့
နောက်ဆုံးတော့ NLD ကို အာဏာလွှဲမပေးဖို့ ဗိုလ်ချုပ် သန်းရွှေနဲ့
အပေါင်းအပါတွေ သဘောထား တင်းမာတဲ့သူ တွေရဲ့  တောင်းဆိုချက်ကို
ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွှန့်တို့ပါ ပူးတွဲပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင်ကို တင်ပြလာတဲ့
အခါမှာတော့ NLD ကို အာဏာလွှဲ မပေးဖို့နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနိုင် အမတ်တွေဟာ
အခြေခံ ဥပဒေ အသစ် ရေးဆွဲဖို့သာ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ န၀တရဲ့  ၁/၉၀
ကြေငြာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကတိကို လွယ်လွယ်လေး လက်နဲ့
ရေးပြီး ခြေနဲ့ ဖျက်ခဲ့တာကို အားလုံး အမှတ်ရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
၁၉၉၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရဲ့  သင်ခန်းစာကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေ
လက်အောက်က လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များရဲ့ 
Pressure တွေရယ်၊ ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေရဲ့  Pressure တွေရယ်၊
ပြည်ပ နိုင်ငံများရဲ့  Pressure တွေရဲ့  ဒဏ်ကို အကြီးအကျယ် ခံခဲ့ ရပြီး
နောက်ဆုံး ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ရူးခဲ့ရတဲ့ အရှုးတပိုင်းလို ဖြစ်သွားခဲ့ ရပါတယ်။
အဲဒီ တုန်းက ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွှန့် ကိုယ်တိုင် ဗိုလ်ချုပ် သန်းရွှေဘက်ကို
ဘက်ပြောင်းခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင် ဖယ်ရှားရေးကို
တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြိတ်ပြီး စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ပြိုင်တည်း မှာဘဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင်နဲ့
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို တသားတည်း ဥပက္ခာပြု
ဖယ်ရှား ခဲ့ပါတယ်။ နောက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေ တက်လာပြီး
အမျိုးသားညီလာခံ ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ
နိုင်ငံရေး ပါတီတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကို လှည့်စားခဲ့ပြန်ပါတယ်။
လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား တွေကို
ဟိုလိုလို ဒီလိုလို လုပ်ပြီး နိုင်ငံရေး လှည့်ကွက် အမျိုးမျိုးနဲ့
အယုံသွင်း ခဲ့တယ် ဆိုတာကို လည်း ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သတိပေးချင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ရှေ့ တန်းက အော်နေရှာတဲ့ ကိုအေးလွင် (၈၈
ကျောင်းသား) နဲ့ အဖွဲ့တွေကို အကျဉ်းကျနေစဉ် ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့တွေက
ကြိမ်ဖန် များစွာ နားချ စည်းရုံးမှုနဲ့အတူ အမျိုးသား ညီလာခံဆိုတာကြီးကို
ဘုမသိ ဘမသိ အချိန်ကတည်းက သဘောတရား ရိုက်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
NLD ဖြိုခွဲရေး ဆိုတဲ့ Plan အရ လည်း NLD ထဲက မိုးလင်း၊ ကြည်ဝင်းတို့
အဖွဲ့တွေကို ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့တွေကဘဲ ဖဲ့ထုတ် စည်းရုံး နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ယနေ့ ထောက်လှမ်းရေး ပျောက်သွားပေမဲ့ ဒီ အဖွဲ့တွေကတော့
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့  Psy War မှာ အသုံးချဖို့ လက်ကွက် ကျန်ရစ်
ပြည်ပမှာ ဆိုရင် နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ပေါက်ရောက်တဲ့ အထူးသဖြင့်
အနောက်နိုင်ငံတွေကို ထိုးဖောက် ၀င်ရောက်နိုင်မဲ့ ဒေါက်တာ
ကျော်ရင်လှိုင်တို့၊ ဒေါက်တာ ဇာနည်တို့အား ထောက်လှမ်းရေးကဘဲ အသိမဲ့
သတင်းပေး Unconscious Informer အဖြစ် သုံးခဲ့သလို ယခုလဲ ဒေါက်တာ
ကျော်ရင်လှိုင် အပါအ၀င် English လို ဘိုလို ပြောနိုင်တဲ့ သူတွေကို
အများကြီး ပြန်လည် အသုံးချ နေတာတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နအဖရဲ့  စည်းရုံးမှုကို ခံသွားရရှာသော အေးလွင်
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ပြောချင်တာက ယခင်၊ ယခု အသုံးချနေတဲ့ သူတွေကို
မျိုးချစ် စိတ်ဓာတ်တွေ သွင်းပြီး ထင်ရောင်ထင်မှား ဖြစ်စေမဲ့
အကြောင်းအရာများကို အခြေခံကာ မြှောက်ပင့် ပေးလိုက်သည့်အတွက်
Brain Wash လုပ်ခံရမှန်း မသိ လုပ်ခံလိုက်ရတာကို သတိထား စေချင်ပါတယ်။
အဲဒီ သူတွေကိုယ်တိုင်ကတော့ သူတို့ကို သူတို့ မသိ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်
သူတို့ကိုလည်း အမြင်မှန်တွေ ပြန်ရအောင် Brain Wash ပြန်လုပ်ပေးဖို့
လိုလိမ့်မယ် လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ယနေ့ နေပြည်တော်ကနေ
သတင်းပေးပို့လာတဲ့ အတွင်းသတင်း တစ်ခုကို အသိပေးချင်ပါတယ်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်လို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေသည် ယခင်
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကဲ့သို့ မဖြစ်စေရန်၊ Plan များ ရေးဆွဲထားတယ်လို့
သိရပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို မဖြစ်မနေ လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
A Plan အနေနဲ့ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်တပ် ထောက်ခံတဲ့ အုပ်စုက
ပြတ်ပြတ်သားသား နိုင်ခဲ့မည် ဆိုလျှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ
အနေဖြင့် အစိုးရ ဖွဲ့၍ အာဏာလွှဲပြီးပါက ၄င်း အနေဖြင့် တရုတ် နိုင်ငံက
ခေါင်းဆောင် တိန့်ရှောင်ပိန်၊ အီရန် နိုင်ငံက ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်
အဌာကိုလာခိုမေနီ တို့လို ရှိနေမည် ဖြစ်ပြီး နေရာတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ကို
B Plan အနေနဲ့ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်တပ်
ထောက်ခံတဲ့ သူများ ပြတ်ပြတ်သားသား မနိုင်ခဲ့ရင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
သန်းရွှေနဲ့ အတူ လက်ရှိ SPDC (သို့) အလားတူ စစ်ကောင်စီ တစ်ခုသည် အစိုးရ၏
နောက်ကွယ်တွင် ရှိနေမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အနေဖြင့် မြောက်ကိုးရီးယား၊
ကျူးဘား နိုင်ငံ တို့လို ယခင် မဆလ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနေ၀င်းလို ပုံစံမျိုး ဆက်ရှိ
C Plan အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်တပ်ထောက်ခံသူများ
ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါက နောက်တစ်ကြိမ် စစ်တပ်က အာဏာ ပြန်သိမ်းဖို့ ဆိုပြီး
Plan (၃)ခု ရေးဆွဲထားပြီး ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိရပါတယ်။
ဒီ Plan တွေ မတိုင်မှီ ထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ နိုင်ငံခြားရေး
၀န်ကြီး ဌာန ၀န်ထမ်း တွေမှ နေ၍ နိုင်ငံတကာ မှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ 
အုပ်ချုပ်ပုံ အုပ်ချုပ်နည်းတွေကို သတင်း စုဆောင်းပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
သန်းရွှေရဲ့  ရုံးကို အစီရင်ခံ ခဲ့ရပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာဥပဒေ၊
နည်းဥပဒေကို ရေးဆွဲဖို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက အမျိုးသား ညီလာခံ
ဗဟို ကော်မတီဝင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသောင်းညွှန့်ကို တိုက်ရိုက်
လမ်းညွှန်ပြီး ရေးခိုင်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂၀၀၈ ခု မကုန်မှီ ဦးသောင်းညွှန့်ကိုယ်တိုင် အချောသတ်ပြီး
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေထံ လက်မှတ် ထိုးဖို့
မူလက ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ Election Law ထုတ်ဖို့
လက်အောက်က စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက
ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ ရုံးက
ထွက်လာတဲ့ သတင်းအရကတော့ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မှီ (၆) လ လောက်လိုမှ
အမိန့်ထွက်မယ်။ ပါတီတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် မလှုပ်ရှားနိုင်အောင် အချိန်
ကန့်သတ်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီ့ပြင် စစ်တပ် ထောက်ခံမည့် ကြံ့ဖွတ် အပါအ၀င်
အခြား နိုင်ငံရေး ပါတီတွေအပေါ် လက်ရှိ အခြေအနေကို အားမရသေးဘူးလို့
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက မှတ်ချက်ပြုထားကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်
ဒီ အဖွဲ့တွေကို ရက်တို နိုင်ငံရေး မွမ်းမံ သင်တန်းတွေ ပေးဖို့ ကြံ့ဖွတ်
၀န်ကြီးတွေကို ဆူပူ နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံတကာနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ အနေနဲ့ နာဂစ် မုန်တိုင်း
အပြီး ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံ ဥပဒေ သစ်ကို အနောက်နိုင်ငံတွေက
လက်ခံလာအောင် လုပ်ဖို့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဌာနနဲ့ ထောက်လှမ်းရေး
အဖွဲ့တွေကို Pressure ပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ
ပြီးသွားပေမဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့  အသိအမှတ်ပြုမှု မရဘူး ဆိုရင် ဘယ်လို
အစိုးရမျိုးဘဲ ပေါ်လာပေါ်လာ ထူးခြားမှု မရှိနိုင်ဘူး ဆိုတာကို ဗိုလ်ချုပ်
သန်းရွှေ အနေနဲ့ သဘောပေါက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူ့အနေနဲ့ မထူးဇာတ်ခင်းပြီး ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ဆိုတာမျိုးလဲ
လုပ်သွားနိုင်တယ်လို့ နေပြည်တော် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ရုံးက ထွက်လာတဲ့
သတင်းတွေ အရ သိရပါတယ်။ ယခု နောက်ဆုံး ရတဲ့ သတင်း ကတော့
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ဘယ်တော့မှ အာဏာကို လက်လွှတ်မှာ မဟုတ်၊
သေရင်တောင် သရဲ ဘ၀ကနေ အာဏာကို ယူထားမှာဟု ၄င်းနှင့် နီးစပ်သော ဆွေမျိုး
အသိုင်းအ၀ိုင်းက တဆင့် သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး နားလည်
ထားရမှာ ကတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့  ရလဒ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့
မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ဘာတစ်ခုမှ အကျိုး ဖြစ်ထွန်းလာမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို
သေသေချာချာ နားလည်ထား စေချင်ပါတယ်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ သာမန် အရပ်သူ အရပ်သားများတင်မကပါဘူး။
တပ်မတော်သားများ အားလုံးလည်း ကျေးကျွန် ဘ၀ကို ရောက်နေကြရတာပါ။ ဒီ
ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဒီ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဆက်လက် သွားနေလို့ကတော့ “ကျွန်” ဘ၀က
လွတ်မြောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်ကျွန်ပြုမည့်
ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို တကယ် ဂုဏ်သိက္ခာ
ရှိရှိနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာလူမျိုးရယ်လို့ ဖြစ်စေချင်ရင် လက်ရှိ
စစ်အစိုးရကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မှီ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေရယ်၊
အတိုက်အခံ အင်အားစု တွေရယ်၊ လယ်သမား၊ အလုပ်သမားများရဲ့ 
ကိုယ်စားလှယ်တွေရယ်နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့ ၀ိုင်းဝန်း ဖိအားပေးဖို့
လိုပါတယ်။ ဒီလို ဖိအားကို အားလုံး တက်ညီလက်ညီသာ လုပ်ပေးမည်ဆိုလျှင်
တပ်မတော် တွင်းမှာ ရှိနေသော ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ပါဝင်လာ နိုင်လိမ့်မည်
နိဂုံးချုပ် အနေဖြင့် တင်ပြချင်တာကတော့ စစ်တပ်အတွင်းမှာလည်း
မြန်မာနိုင်ငံ ကောင်းကျိုး အတွက် ပြုလုပ်ချင်နေတဲ့ အစုအဖွဲ့တစ်ခု ရှိကို
ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တုိ့ အားလုံးသာ သဘောထား ကွဲတာတွေ တခြားကိစ္စတွေကို
ဘေးဖယ်ထားပြီး “ကျွန်တော်တုိ့ နိုင်ငံအတွက်” ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက် တစ်ခု
ထားကာ ညီညီညွတ်ညွတ် စုပေါင်း လိုက်ကြရင် စစ်တပ်ထဲကလည်း
ပါဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာ ကျွန်တော်တုိ့ လိုချင်တဲ့
ပုံစံမျိုး ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်လာလိမ့်မယ် ဆိုတာ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
“ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ လိမ်လည် လှည့်ဖျားမှုကို သတိပြုကြပါ”
(ဆောင်းပါးသည် တနှစ်ကျော်က ရသော သတင်းအပေါ် အခြေခံထားသော်လည်း
နအဖသည် ဆက်လျှောက်နေဆဲဖြစ်သည် )
Posted by Mr Htay Tint at 1:40 PM 1 comments
Burma Army still attack civilan in Myanmar for Army personal Election
မြန်မာတွေ အနောက်ယဉ်ကျေးမှု ထဲဝင်ကြသလို
အရှေ့ ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်း ထိမ်းသိမ်းကျသည် ။
အချို့ က အသုံးချကြပါသည် ။
လူ့ အခွင့်အရေးပြည့်ဝစွာ ရရှိသော
ထာဝရ အာဏာရရှိရေးနဲ့ 
နိူင်ငံတော်ကြီး ကို ဘက်ပေါင်းစုံ
နည်းမျိုးစုံနဲ့ပြောင်းလဲရန်
၂ ဖက် ၃ ဖက် ၄ ဖက် စလုံး
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ခဲ့လာခဲ့ပေသည် ။
နှစ်ဖက် မှ နှစ်ဘက်
ရာစု ၂ စုကျော်ခဲ့ပါပြီ ။
ဘာသာရေး ဖိနှိပ်မှု အရဖြစ်စေ
လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံ ရလို့ ဖြစ်စေ
တတိယနိုင်ငံ နိူင်ငံခြားရေး ဌါနမှ တဆင့်
လက်ခံပြီး ဘဝသစ် အခြေချ စီမံကိန်းနှင့်
လူသားဆန်ဆန် ကူညီနေပါသည် ။
ပွဲစားတွေအမျိုးမျိုး ပေါ်လာပါသည် ။
ဒေါ်လာ ၈၀၀၀ တဲ့
ယူရို ၉၀၀၀ တဲ့
ဒုက္ခသည်စခန်းဝင်စရာ မလို ပါတဲ့--
မိမိလာတဲ့ ဘဝအမှန်တွေ မေ့ကုန်ကြပြီ ။
အနောက် အဝတ်ပွပွကြီးတွေ ဝတ်တတ်ပြီလေ။
ကားတွေ အပြိုင်ဝယ်စီးကြနဲ့ 
မိန်းမတွေ အပြိုင်အဆိုင် ခိုးယူကြနဲ့ 
နအဖ မဝတ ရဝတ အောက်
အဖေ အမေတွေ မောင်နှမတွေ ဆွေမျိုးတွေက
တိုးတက်သွားတဲ့ သူတို့အမျိုး အမေရိကန်အသစ်ကြီးရဲ့သတင်းကို
အထင်တကြီး အားကိုးကြီး သတင်းတွေနားထောင်ရင်း နားထောင်နေတယ် ။
ပြည်တွင်းမှာ နအဖက လိမ်လေလေ
ရဝတက အတင်း စာရင်းကောက်လေလေ။
သူတို့ ရဲ့အမျိုး ရွံ့ ထဲမှာ နပန်းလုံးခဲ့ဖူးတဲ့
ဖင်ထဲ ရွံ့ ဝင်ဖူးတဲ့ မြန်မာပြည်ဘွား
စကားပြောရင် လေချွန်သံနဲ့ 
အမေရိကန်နိုင်ငံသား အသစ်ကြီး တွေဆီက
မျိုးစေ့မမှန် သူတွေ အမေရိကန်ကို ဘယ်သူတွေ ရောက်လဲဆိုတာ
စာရင်းတွေကို မဲဆောက်မှာ ကတည်းက ယူထားပြီးသားလေ ။
နိုင်ငံကြီးမှာ မြို့ ကြီးမှာ
တိုးတက်နေတဲ့ ရုပ်ဝတ္ထုတွေကြားက ။
ရောက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဇိမ်ခံ
ဘီယာဘူးတွေကို အပြတ်နှံ နဲ့ 
အတိုးချ အပြတ်လွေးရင်း နဲ့ 
မွေးလာထဲက မပါလာတဲ့ နိူင်ငံရေး အရည်အသွေး
ဘယ်လို ဦးဆောင်မှု မှ မပေးနိုင်
ဆော်စရာ ပစ်မှတ် မရှာတတ်သမို့ 
အင်တာနက် ကွန်ပြူတာက အော်
ငါသာလျှင် ဘိုးအေဆော်ကြီး ဂုဏ်ပုဒ်တပ်။
ဆေးဒဏ်နဲ့အရက်တန်ခိုးက
နအဖ ပေါ်လစီ လမ်းညွန်ချက်တွေ အတိုင်း
နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ အကုန်ချကြ...တဲ့ ။
လှေနောက်က ကြိုးနဲ့ လိုက်လိုက်
အများသူငှာ ပျော်စရာပွဲ မှာလေ
အပြစ်ရှာ ဖြုတ်ထုတ် အပုတ်ချပြီး
အမျိုးတွေရဲ့ဘဝက ရင်လေးစရာပဲ ။ ။
Jul 10 ,2010
Posted by Mr Htay Tint at 1:47 PM 1 comments
Posted by Mr Htay Tint at 12:32 PM0comments
kort van History of Burma
Burma isaSoutheast Asian country of approximately 45 million and 1 million stay with worked outside country nearly 1 million was refugee ,people in 8 major ethnic nationalities: ethnic Burmans account for roughly 60% of the population, with the Shan, the Karen, the Kachin, and the Karenni being the next most numerous. Burma's diverse,
multicultural society boasts 106 languages and dialects. Most of their main languages is 8 and offical is Burmese languages in Myanmar.The peoples' spiritual faiths also reflect the underlying diversity of history and culture, including Buddhism, Christianity, Islam and varieties of animism. Burma is rich in natural resources, such as precious stones, tropical hardwoods, gas and onshore and offshore energy reserves.
The modern boundaries of Burma are not historical but the legacy of administrative convenience during the sixty years of British colonial rule, which ended in 1948. General Aung San, architect of Burma's independence and broadly revered as the leader of the independence struggle, was able to win the trust of the ethnic nationalities at the Panglong Conference in February 1947 and unified them with the Burmans. Together, all the nationalities participating in the conference demanded independence from the British. General Aung San's assassination in July 1947, just as the Union struggled to be born, isanational tragedy that haunts Burma to this day. The leadership vacuum left by his death gradually led to the breakdown of trust that existed among all the nationalities of Burma.
General Ne Win, claiming that the nation was about to break up, stagedacoup in 1962 and institutedasystem of governance that ensured the military remains supreme in every aspect of life. That system has lasted 36 years today.
From 1962 to 1988, General Ne Win and his cronies told Burmese way socialist and sealed Burma away from the international community. The peoples of Burma became pauperized by the junta's economic experiments and Burma's status as one of the wealthiest countries in Asia declined to one of the ten poorest in the world.
No justic,No Freedom,Law come from Army meeting , Power come from GUN
The dominating role of the military was assured by subjecting the people to brute force and introducingapervasive system of surveillance, the use of forced labor, extra-judicial killings, ethnic cleansing, and forced relocation of populations. BURMA Army is owner of country and people is their slave.
In 1988 the peoples of Burma asserted their right to dignity and hope. Students of university started agiant Burma Army and month later Monks, students and workers led non-violent demonstrations and general strikes nationwide calling for democratic reform. In 18 September of that year 1988, the military, calling itself the State Law and Order Restoration Council (SLORC) stagedacoup and in the process opened fire and killed thousands of unarmed democracy protesters. Over 10000 student went to Thai Burma border jungel who live ethnic freedom group.
To pacify the people, the SLORC held multi-party elections in May 1990. The elections were won byalandslide by the National League for Democracy (NLD) headed by Daw Aung San Suu Kyi, General Aung San's daughter, who emerged during this crisis to lead the NLD. With the party it backed winning onlyahandful of seats, the military embarked onacampaign of terror against the NLD members, elected representatives and political parties. Daw Aung San Suu Kyi was kept under house arrest during and after the elections for six years (from 1989 to 1995).
The NLD managed to win 392 of 485 seats despite the imprisonment of most of its leaders and the junta's strong-arm tactics.
Daw Aung San Suu Kyi continues to be the symbol of non-violent struggle for democracy and has successfully united diverse voices calling for the restoration of democratic freedoms and human rights. The Nobel Committee awarded the 1991 Peace Prize to Aung San Suu Kyi in recognition of her personal courage and her commitment to democracy and non-violence.
The NLD, representing democratic choice and reconciliation, continues to advocate peaceful solutions and dialogue. The generals have consistently refused.
2010 Burma Army will new election for forget 1990 election.
Burma Army don't give power to people.
မြန်မာပြည် ဟုအများလက်ခံသည့် ဒေသအတွင်းမှ မျိုးတူ လူမျိုးအနွယ်များ
Posted by Mr Htay Tint at 12:41 AM0comments
နောက်တက်လာတဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ လူငယ်တွေ သမိုင်းတခုကို သိစေဖို့ 
Members of Committee Representing People's Parliament
(clockwise) First row: U Lwin, U Aye Tha Aung, U Aung Shwe, U Than Tun, U Tin Oo
Second row: U Hla Pe, U Soe Myint, U Lun Tin, U Nyunt Wei, Daw Aung San Suu Kyi
U Aung Shwe graduated in Arts from Rangoon University in 1940. He served in the BIA, BDA and PBF from 1942 to 1945. In 1961 he was forced to retire from the Army while serving as the Commander of the Southern Military Command due to accusations that he was partial towards elections. He was appointed as the ambassador to Australia, Egypt, France, Spain and New Zealand from 1961 to 1975. During the 1990 election, he was the Chairperson of the POOL before the SLORC banned the party. While Daw Aung San Sliu K.yi and U Tin Oo were placed under house arrest he became the Chairperson of the NLD. He was among the NLD representatives who boycotted the National Convention on 28 December 1995.
U Aye Thar Aung represents the Shan National League for Democracy, Arakan League for Democracy, Mon National Democracy Front, and Zomi National Congress. He was born in Myaebon Township, Arakan State. He served asaSergeant-Major and worked in Ka-Pa-Sa, the Heavy (Military) Industry Corporation. He was dismissed and imprisoned in Mandalay jail due to his underground political activities and released under amnesty in 1974. He isamember of Central Executive Committee of ALD. He is alsoamember of the ALD and UNLD Secretariats.
U Soe Myint (a) Thakhin Soe Myint
U Nyunt Wei
U Nyunt Wei graduated from Rangoon Institute of Economics and gotaMaster of Arts in Administration from Harvard University. Between 1952 and 1986, he worked as the chief manager at the Bank of Industry and the Bank of Agriculture, and asaSupervisor at the Insurance Corporation. On 26 March 1991 following the arrests of Daw Aung San Suu Kyi and U Tin Oo, he was appointed treasurer of the Central Executive Committee of the NLD. U Nyunt Wei was part of the NLD boycott of the National Convention in December 1995.
LTNLD = United Nationalities League for Democracy
There were so many tragedies during 20 years of analysis about Burma.
Military regime had cracked 1990 winner party NLD.
Dialogue is just show case and not genuine.
SPDC destroy ethnics revolution groups completely sayingaword "peace"
and having alliance with neighboring countries.
SPDC repeatedly announce peace talk.
Finally SPDC will legitimatize it government
by holdingasham election in 2010.
The hope of citizens of Burma and political parties :
Hopingagovernment representing people of Burma
It isalast time:
This isatime International community including UN and other nation to help pragmatically Burma.
I like to present this isatime, especially people of Europe,
should help Burma to change practically for peace, justice and freedom.
3 July 2010 meeting
Posted by Mr Htay Tint at 11:37 AM0comments
Posted by Mr Htay Tint at 10:14 AM0comments